Tag: ọdịnala seo | Martech Zone
Tag: ọdịnala ọdịnala
SEO anwuola dika anyi matara. Ochie mgbakọ na mwepụ nke backlinks na nri na-eri nri bụ ugbu a maka Google iji chọpụta saịtị gị ma lie ya na nsonaazụ ọchụchọ. SEO abụghịzi nsogbu mgbakọ na mwepụ, ọ bụ mmadụ. Ndị na-egosi mmekọrịta mmadụ na ibe na-aghọ isi nke ogo na njikọta algorithms na-lara ezumike nká. Oge eruola ka ị hụ eziokwu banyere SEO… ma mezie ya. N'ezie anyi jiri a
Anyị nwere ọtụtụ usoro nlekota oru na-enweghị isi na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ mgbe niile. Fọdụ na-agba ọsọ na nkeji ọ bụla, ụfọdụ otu ugboro n’abalị dabere na ọrụ ha. Iji maa atụ, anyị nwere ike ime edemede nke na-ebupụ ndị ahịa niile na-azụghị ahịa n'ime ụbọchị 30 iji zigara ha dere. Kama ịnwa iji aka gị soro ihe ndị a niile, ọ dị mfe karị ịrụ ọrụ ndị a na-ahazi na akpaghị aka